Ithegi: ngaphakathi ngaphakathi | Martech Zone
Ithegi: ngaphakathi kwishishini
Umthengi-Kuqala kwi-E-Commerce: Izisombululo zeSmart zale Nto Awunakho ukufikelela kuyo ukuze ungalunganga
NgoLwesithathu, Aprili 21, 2021 NgoLwesithathu, Aprili 21, 2021 UZain Jaffer
Ixesha lexesha lobhubhane kwi-e-commerce lize nokutshintsha komthengi kulindelo. Nje ukuba ukongeza ixabiso, iminikelo ekwi-Intanethi ngoku iyeyona ndawo iphambili yokufumana abathengi kwiimpawu zentengiso. Kwaye njengeyona faneli iphambili yokunxibelelana kwabathengi, ukubaluleka kwenkxaso yabathengi ebonakalayo ikwindawo yonke ephezulu. Inkonzo yabathengi ye-e-commerce iza nemiceli mngeni kunye noxinzelelo. Okokuqala, abathengi basekhaya bachitha ixesha elininzi kwi-Intanethi ngaphambi kokuba benze izigqibo zokuthenga. I-81% yabaphenduli baphande eyabo
Nazi iingcebiso ezingama-33 ze-LinkedIn onokuthi uzenze kuTwitter!
NgoLwesihlanu, Septemba 26, 2014 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
Akukho ntsuku zininzi apho ndingafundi uhlaziyo oluvela kwi-LinkedIn, ukunxibelelana nomntu okwi-LinkedIn, ukuthatha inxaxheba kwiqela kwi-LinkedIn, okanye ukukhuthaza umxholo wethu kunye neshishini kwi-LinkedIn. I-LinkedIn ngumzila wobomi kwishishini lam- kwaye ndonwabile ngohlaziyo endilwenzileyo kwiakhawunti yeprimiyamu ekuqaleni kwalo nyaka. Nazi ezinye iingcebiso ezintle ezivela kwimithombo yeendaba zentlalo kunye nabasebenzisi be-LinkedIn abavela kwiwebhu yonke. Qiniseka ukuba wabelana